MAHAJANGA : Renim-pianakaviana iray novonoin’ny vadiny, hita faty tao an-tranony
Vehivavy manodidina ny 29 taona, manambady sy manan-janaka vavy iray 13 taona, nipetraka tao amin’ny fokontany Aranta ao an-tampon-tanànan’i Mahajanga no nahazoana loharanom-baovao, omaly fa hita faty tao an-tranony. 7 juin 2019
Vatana mangatsiaka efa tsy nisy aina intsony no sady feno ratra efa maina no hita rehefa nopoirina ny efitrano fatoriany, izay nihidy tamin’ny gadana. Araka ny fanazavana voaray tamin’ireo mpifanolo-bodirindrina amin’izy ireo dia efa ho efatr’andro teo ho eo no tsy dia hita nivoaboaka ny trano intsony io vehivavy io. Tsikaritry ny manodidina ihany koa anefa fa misy disadisa lava izy sy ny vadiny ary saika ho isan’andro mihitsy izany ka nanomboka teo no nanana ahiahy ny mpiara-monina rehefa tsy nahita azy intsony.
Ilay rangahy vadiny ihany koa tsy hita intsony. Ny talata alina 4 jona no nisy nahatsikaritra nipetraka toy ny nanjoretra teo an-tokotany ity raim-pianakaviana, tokony ho tamin’ny 11 ora alina tany ho any. Efa nampanahy ny rehetra ny fomba fihetsiny kinanjo tsy hita intsony ny tenany taorian’izay. Tsy maintsy noterena ny zanany vavy mba hanapoirana ny trano, hizahana ny zava-misy marina. Akory ny hatairan’ny rehetra raha nahita ity renim-pianakaviana nitsirara tamin’ny tany, naratra sy efa maty. Avy hatrany dia ilay rangahy vadiny no niantefan’ny sain’ny maro ho namono azy. Efa eo am-pelantanan’ny Polisy moa ny fisahanana ny fanadihadiana lalina momba ity tranga ity amin’izao fotoana izao.